UGAAR AH RAGGA: Guurso Gabadha leh calaamadahan waa tan kugu habboon - Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA UGAAR AH RAGGA: Guurso Gabadha leh calaamadahan waa tan kugu habboon
Haddii aad dooneysid inaad go’aansatid gabarta aad guursan lahayd dabadeed aqri tilmaamahan.
1. Way kugu faantaa
Haddii ay kugu faanto isla markaana ku ammaanto marka ay la joogto saaxiibadeed iyo dadka kale waxay u badantahay inay tahay gabadhii aad guursan lahayd ee kugu habbooneyd, haddii ay aaminsantahay inaad ninka waangsan ee ay naag kasta u baahantahay dabadeed waa inay kaa caawisaa go’aanka arrintaas.
Ninka ragga ah saaxiibadiis oo kuwo muhiim u ah nin kastana waxa uu rabaa haweeney fahamta muhiimadda ay leeyihiin saaxiibadiis haddii ay la dhacsantahay waxa ay sameynayaan saaxiibadaa isla markaana ay jeceshahay inay idinla soo damaashaado, taasi waa haweeney wanaagsan.
3. Haweeneyda daneheeda ka adag
Marka ay fahamsantahay in wax kasta aysan adiga kuu baahneyn oo ay sidoo fahamsantahay, haweentaas oo kale waxay kaa caawineysaa inaad guulahaaga gaartid, iyadoo teedana wadata, waana tan kugu habboon.
4. Waad u xiistaa marka aysan kula joogin
Marka aysan kula joogin aad ayaad uga fakartaa, marka aad sidaan dareentid, waa inaad go’aan gaartaa.
5. Naftaa isku hurtiin labadiina
Haddii haweneydaada aysan nafta kuu huri Karin adigana aadan u huri Karin dabadeed umaleyn mayo inaad u baahantahay inaad ka fekertid guurkeeda, si guurka u shaqeeyo waa in nafta la isku huraa, marka haddii ay nafta kuu hurto adigana aad lamid tahay, go’aankaas gaar.
6. Waa taageerahaaga koowaad
Had iyo jeer waa tan ku garab taagan marka aad xaaladaha adag ku jirtid, cidlana kaagama tageyso marxaladaha adag.
Waxku aaminsantahay adiga iyo riyooyinkaaga xittaa marka uusan qof kale aaminsaneyn, xittaa waqtiyada ugu adag waxay aaminsantahay inaad ka gudbi doontid oo guul aad gaari doontid, haddii aad aaminsantahay inay tahay garabkaaga koowaad dabadeed guurso gabadhaas.
Tilmaamahan waa inay kaa caawiyaan go’aanka qofka aad nolosha la qaadan lahay.
Aragtidaada hoos noogu reeb, mahadsanid.
Previous articleLixdaan arrimood oo Haweeneyda ka dhiga Xaas wanaagsan oo cajiib ah
Next articleWax ka ogoow Yiridka & Calaamadaha lagu garto!!
10 Astaamood Oo Aad Ku Ogaan Kartid In Ninku Ku Jecelyahay...
Aayaha editor - February 22, 2019 0
Sidee haweeneyda ku ogaan kartaa haddii ninka uu jecelyahay ama uu rabo inuu la seexdo? Tani waa su’aal ay adagtahay in laga jawaabo sababtoo...
5 WAX YAABOOD OO AADAN KA OGAYN SHUMISKA (BAASHADA) AMA DHUNKASHADA...
9 Waxyaabood Oo Haddii Aad U Sameyso Ninkaaga Ka Dhigaya Mid...
4 Waxyaabood oo ku dhacaya jirkaaga haddii aad socotid maalin waliba